5 ဥရောပမှာတော့ကြိုးစားပါရန်အကောင်းဆုံးဒေသခံသကြားလုံး | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့ကြိုးစားပါရန်အကောင်းဆုံးဒေသခံသကြားလုံး
ဒေသခံသကြားလုံးအများအပြားမျိုးပေါင်းအတွက်လာ အားလုံးဥရောပကျော်. နိုင်ငံတိုင်းနှင့်ဒေသသူတို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှဂုဏ်ယူနေကြသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်းအားရစရာရှိပါတယ်. မွှေးသွားအတူခရီးသွားဧည့်များအတွက်, အသစ်သောအရသာထက်ခရီးသွားလာအကြောင်းပိုမိုသှေးဆောငျရာမရှိ. ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းရှိပါတယ်5ဥရောပတိုက်တွင်ကြိုးစားရန်အကောင်းဆုံးဒေသခံသကြားလုံး.
1. တစ်ဦးကဒေသခံချို – Mozartkugel, Salzburg, သြစတြီးယား
မှတစ်ခုဖြစ်သော လူကြိုက်အများဆုံး နှင့်ဥရောပထဲမှာကျော်ကြားဒေသခံသကြားလုံးအဆိုပါဖြစ်ပါသည် Mozartkugel. ငါတို့သိထားတဲ့အတိုင်း, ရှင်ပေါလု Furst ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်အကြာ Salzburg အတွက်မူရင်းစာရွက် created. ဒါဟာအလွှာဖြစ်ပါသည် ချောကလက်အားရစရာ အစိမ်းရောင်စိမ်းဝါနုရောင်နှင့် nougat နှင့်အတူ.
အတော်ကြာစက်မှုလုပ်ဘတ်ဂျက်ဗားရှင်းရှိပါတယ်, သငျတို့သစူပါမားကက်မှာသူတို့ကိုရှာတှေ့နိုငျ. သို့သျောလညျး, မူရင်းဗားရှင်းမဟုတ်ပါဘူး အရမ်းစျေးကြီး, ထိုသို့စျေးနှုန်းကွာခြားချက်ရကျိုးနပ်သည်. ယေဘုယျအား, သူတို့သည်သင်၏သြစတြီးယားခရီးစဉ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံးကိုဒေသခံသကြားလုံး၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏.
2. တစ်ဦးကဒေသခံချို – ဒိုးနက်, ဘာလင်, ဂျာမနီ
သင်ဤသည်ဒေသခံချိုမြိန်၏နာမတော်ကိုပြောမယ့်ထုံး၌သင်တို့၏လျှာကိုကြိုးနဲ့တုတ်စရာမလိုပါ. ပြည်သူ့ဘာလင်အပြင်ဘက်ဘာလင်မှသူတို့ကိုအတိုကောက်, နှင့်ဘာလင် pancakes. အမေရိကန်ဒိုးနက်မတူဘဲ, သူတို့ကအလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. သငျသညျအစဉ်အလာစာရွက်အတိုင်းလိုက်နာလိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျချိုတဲ့အရသာဘောလုံးကိုရ, ယိုသို့မဟုတ် Marmalade နှငျ့ပွညျ့စုံ, သကြား icing နှင့်အတူ.
3. stroopwafel, အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
stroopwafel တဦးတည်းဥရောပတိုက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အများဆုံးစွဲလမ်းသည်ဒေသခံသကြားလုံးတစျဦးဖွစျသညျ. များစွာသောအခြားသကြားလုံးမတူဘဲ, စာရွက်ဝေါဟာရအဘယ်မှာတဲ့သူအပေါ်အဘယ်သူမျှမငြင်းခုန်လည်းမရှိ. Gouda ၏ဒတျချြမွို့တှငျ Bakers ၏ပထမဦးဆုံးသူတို့ကိုဖန်ဆင်း. သူတို့ထုပ်ပိုးများနှင့်ကောင်းစွာသွားလာကြောင့်,, သူတို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းများပါစေ.
နှစ်ဦးကိုပါးလွှာန့်ကိုတဦးတည်း Stroopwafel စေတဲ့ caramel "ကော်" အတူယူဆောင်. ဒါကြောင့်အထူးမြည်ပါဘူးသော်လည်း, အဆိုပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအယူခံသူတို့ကိုအကောင်းဆုံးကိုဒေသခံသကြားလုံးတဦးက. ဤရွေ့ကားသကြားလုံးတစ်အောင် စုံလင်သောရေစာ တစ်ရှည်လျားသောနေ့ကအပြီး ရထား-ဖွယ်ရှိနေသည်, စျေးဝယ်, နှင့်စက်ဘီးစီးသူ dodging - အားလုံးပုံမှန်အမ်စတာဒမ်လှုပ်ရှားမှုများ.
4. ဒိန်းမတ်မုန့်, ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်
ဒိန်းမတ်သေးငယ်သည်သော်လည်း, ၎င်း၏အကောင်းဆုံးဒေသခံသကြားလုံး၏ဒဏ္ဍာရီဝေးနှင့်ကျယ်ပြန့်ခရီးသွားလာ. ဒိန်းမတ် pastry သြစတြီးယားချုပ်ထားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူဒိန်းမတ်မှခရီးထွက်. ဒါပေါ့, သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာစာရွက်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်, နှင့်များစွာသောစကင်ဒီနေးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအမေရိကတိုက်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏. သို့သျောလညျး, သင်ဆက်ကပ်အပ်နှံညျတနျးကစုံလင်ရှိရာနိုင်ငံတွင်အများဆုံးကပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ဤသည်ဒေသခံဒိန်းမတ်ချိုမြိန်သငျသညျကိုမြည်းစမ်းမည်ပေါ့ပါးဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ. ယောကျတညျးဟူသောယိုနှင့်အတူကပယ် Top-, ဒိန်ခဲ, သို့မဟုတ်မုန့်ကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောစကင်ဒီနေးအသွင်မသွားအောင်ရန်. ထိုသို့သော်လည်း အရသာနှင့်ကယ်လိုရီကြွယ်ဝ, ကိုပင်ဟေဂင်ရှာဖွေစူးစမ်းရာနေ့အပြီး မိုဃ်းပွင့်အတွက်, သင်တို့သည်ဤအရညျအသှေးနှစ်ခုစလုံးကိုခံစားပါလိမ့်မယ်.
5. Cuberdon, ဘယ်လ်ဂျီယံ
Cuberdon ဥရောပအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးထင်ရှားတဲ့ဒေသခံသကြားလုံးတစျဦးဖွစျသညျ. ဒါဟာ Hat-ပုံဖြစ်ပါသည်, မကြာခဏခရမ်းရောင်နှင့် Raspberry အဆာနှငျ့ပွညျ့စုံ. သင်တဦးတည်းသို့ကိုက်လိုက်တဲ့အခါ, သင့်ရဲ့အံသွားလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဖြည့်သည့်အပျော့အလယ်သို့နစ်မြုပ်. သူတို့ဟာမကြာခဏဘယ်လ်ဂျီယံအကောင်းဆုံးထားရှိမည်လျှို့ဝှက်ချက်ခေါ်. ဒါကြောင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကထိန်းသိမ်းထားရန်ခက်ခဲသည်ဆိုသောကွောငျ့, သူတို့မကြာခဏပြုလုပ်တင်ပို့မဟုတ် Don. သို့သျောလညျး, ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားအိမ်မှာကရောက်စေဖို့လိုလားသူတစ်ဦးခရီးသွားဧည့်များအတွက်, အဆိုပါ cuberdon စုံလင်သည်.
သင်သည်သင်၏အသက်တာသို့အချို့သောသကြားနဲ့အမွှေးအကြိုင်ကို add ပြီးရထားယူချင်ပါနဲ့ အစားအစာခရီးစဉ် ဥရောပတဆင့်? ယနေ့တွင်သင့်လက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့ကြိုးစားပါရန်အကောင်းဆုံးဒေသခံသကြားလုံး” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-local-sweets-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဒိန်းမတ် #sweets ခြော့ကလကျ eurotrip travelaustria travelbelgium travelgermany netရာဝတီ